‘कर्णाली महोत्सव २०७५’ स्थगित
१० मंसीर । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा यही मंसीर १९ गतेदेखि हुने भनिएको व्यापार महोत्सव १ महिनासम्मका लागि स्थगित भएको छ । व्यापारीहरुबीच विवाद भएपछि चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गर्ने उक्त महोत्सव स्थगित गरिएको हो । आन्दोलनरत व्यवसायी, महोत्सवका आयोजक र नगरपालिकाबीच सोमबार भएको छलफलमा…
जाने होइन त कर्णालीको पहिलो थारु होमस्टेमा ?
१ मंसिर । वीरेन्द्रनगर नगरपालीका १ सुर्खेतमा बस्दै आएका विवेक अधिकारी बिदा मनाउन प्राय वीरेन्द्रनगर १० मा रहेको थारु होमस्टेमा जाने गर्दछन् । उनलाई सुविधा सम्पन्न होटेलहरु भन्दा पारिवारीक मायाँ पाईने र अर्गानिक परिकार खान पाईने गाउँको एकान्त ठांउ मनपर्छ । भन्छन् ‘कर्णाली…
सुर्खेतमा सुरु भयो ‘साउना बाथ’
९ कात्तिक । सुर्खेतमा जापानी प्रविधिको साउना बाथ र स्टिम सेवा सुरु भएको छ । विद्युतिय उपकरणको सहायतामा निकालिएको तापसंगै बन्द कोठामा बसेर साउना वाथ गरिन्छ । यसो गर्दा शरीरका बिकार पसिनासंगै बगेर जान्छ । साउना र स्टिमको प्रयोग गर्नाले धुम्रपान र…
पर्यटन प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक : मन्त्री बुढा
७ कार्तिक । पर्यटन प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको सहयोग अत्यावश्यक भएको कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढाले बताएका छन् । प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा होटल बुलबुले भ्यूको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बुढाले कर्णालीमा पर्यटन विकासका लागि सरकार निजी क्षेत्रसंग संगसंगै जाने…
गुर्जा हिमाल आरोहणका क्रममा ८ जनाको मृत्यु
२७ असोज । म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जामा रहेको गुर्जा हिमाल आरोहणका लागि आधार शिविर पुगेका ९ जना मध्ये ८ जनाको मृत्यु भएको छ । गुर्जा हिमालको आधार शिविरमा पुगेका ५ जना कोरियन र ४ जना नेपाली टोलीमध्ये ८ जनाको सब शनिवार विहान भेटिएको…
कर्णाली प्रदेशकै ठूलो गुम्बाको शिलान्यास
२५ असोज । सुर्खेतका खम्पा जातिहरुको अगुवाईमा निर्माण हुन लागेको ‘ठिल्ले ताक्तेन लिङ बौद्ध गुम्बा’ को शिलान्यास गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिङ बुढाले बिहिबार गुम्बाको मुख्य भवनको शिलान्यास गरेका हुन । सन् २०१६ बाट वीरेन्द्रनगरको रातानाङ्लामा निर्माणाधिन…
पशुपतिनाथ दर्शन (फोटो फिचर)
२१ असोज । पशुपतिनाथको मन्दिर विश्वभरका हिन्दूको प्रमुख मन्दिरका रूपमा चर्चित छ। पशुपतिनाथलाई केदारनाथको शिरोभाग समेत मान्ने गरिन्छ । हिन्दु धर्मालम्बीको मुख्य आस्थाको केन्द्र रहेको पशुपतिनाथमा भारतबाट भक्तजनहरु आउने गर्दछन । केदारनाथको शिर भएकालेप्रत्येक वर्ष पशुपतिको स्नानका लागि शिवरात्रिका दिन केदारनाथबाट पवित्र जल…
संस्कृति संरक्षण गर्न जुम्ली घोडा दौड प्रतियोगिता हुँदै
२० असोज । केहि दशक पहिले जुम्लाका प्राय घरमा पालिने जुम्ली घोडा लोपउन्मुख अवस्थामा पुगेको छ । जुम्लामा सडक संजालको पहुँच, चरन क्षेत्रको अभाव हुँदा घोडा पालन व्यवसाय लोप उन्मुख अवस्थामा पुगेको हो । जुम्ला विमानस्थल कालोपत्रे भएपछि परम्परा देखी चल्दै आएको…
आहा! चन्द्रागिरी (फोटो फिचर)
१९ असोज । आन्तरीक तथा बाह्य पर्यटकको मुख्य गन्तब्य बनेको चन्द्रागिरीमा दैनिक सयौंको संख्यामा मानिसहरु जाने गर्छन । सेरोफेरोले चन्द्रागिरी हिल्सका सवै दृष्यहरु कैद गरि प्रस्तुत गरेको छ । हेर्नुहोस् फोटो फिचर : …
सकियो मानसरोवर कैलाश यात्राको सिजन
१९ असोज । मानसरोवर कैलाशको धार्मिक यात्रा गर्ने सिजन यो वर्षको लागि सकिएको छ । असोजको दोस्रो हप्ता लागे संगै मुख्य गरी भारतीय धार्मिक पर्यटकहरु आउन बन्द हुँदा सिजनको अन्त्य भएको हो । मानसरोवर कैलाशको धार्मिक यात्रा गरि फर्केका ४५ जना भारतीय…